Inguqu kwidijithali ngumba wobuNkokheli, hayi umba weTekhnoloji | Martech Zone
Ngaphezulu kweshumi leminyaka, ukugxila kokubonisana kwam kumzi mveliso wethu kuncede amashishini ukuba abethe kwaye aguqule iinkampani zabo ngokwamanani. Ngelixa oku kuhlala kucingwa njengohlobo oluthile lokutyhala okusuka kubatyali mali, ibhodi, okanye iGosa eliyiNtloko lesiGqeba, unokumangaliswa kukufumanisa ukuba ubunkokheli benkampani abunamava kunye nobuchule bokutyhala utshintsho lwedijithali. Ndihlala ndiqeshwe yinkokheli ukunceda inkampani ukuba iguqulwe ngokwamanani- kwaye kwenzeka nje ukuqala ngokuthengisa kunye namathuba okuthengisa kuba kulapho iziphumo ezintle zinokufezekiswa ngokukhawuleza.
Njengokuba ukwehla kwamajelo emveli kuqhubeka kunye nenqwaba yezicwangciso ezifikelelekayo zedijithali zemithombo yeendaba zikhulile, iinkampani zihlala zisokola ukwenza utshintsho. Iingqondo zelifa kunye neenkqubo zelifa ziyaqhubeka, ngohlalutyo kunye nolwalathiso luswele. Ngokusebenzisa inkqubo ye-agile, ndiyakwazi ukubonisa iinkokheli ngedijithali yazo ukukhula kwezentengiso kumashishini abo, phakathi kwabo bakhuphisana nabo, kwaye ngokubhekisele kubathengi babo. Obo bungqina bunika ukucaca ukuba kufuneka sitshintshe ishishini. Nje ukuba singenise, siphuma kuhambo lokutshintsha ishishini labo.
Ndiyothuka rhoqo ukuba abasebenzi bakulungele ukufunda nokuhlawulisa… kodwa kuhlala kulawula kunye nobunkokeli eziqhubeka nokubetha ngekhefu. Naxa beqonda ukuba enye indlela yokutshintsha kwedijithali kunye Ubuchule Ukuphela, batyhalela emva ngenxa yokoyika utshintsho.
Unxibelelwano oluphantsi oluphezulu kunye nokusilela kobunkokheli benguqu ziingxaki ezibalulekileyo ezithintela inkqubela phambili kwinguqu.
Ngokutsho isifundo samva nje esivela kwiNintex, Utshintsho kwidijithali alukho kangako kwimiba yetekhnoloji njengoko ingumba weetalente. Kungenxa yoko le nto abacebisi njengam bekwimfuno ephezulu ngoku. Ngelixa iinkampani zinetalente engakholelekiyo ngaphakathi, loo talente ayisoloko ivezwa ngeendlela ezintsha, amaqonga, imithombo yeendaba kunye nendlela. Iinkqubo ezi-static zihlala zihleli kunye nolawulo lweendlela eziqinisekisa uzinzo… ezinokuthi zithintele eyona nto ifunekayo.
kuphela I-47% yomgca wabasebenzi beshishini Bayazi nokuba luyintoni na utshintsho lwedijithali- myeke nokuba yinkampani yabo na
unesicwangciso sokujongana / sokufezekisa inguqu yedijithali.
67% yabaphathi Yazi ukuba loluphi utshintsho lwedijithali xa kuthelekiswa ne-27% kuphela yabangengabo abaphathi.
Nangona kunjalo I-89% yabantu abathatha izigqibo besithi banesikhokelo esonyuliweyo, akukho mntu uvela njengenkokeli ecacileyo kwiinkampani zonke.
Ukwahluka okubalulekileyo kwisithuba sokwazisa ngumgca we-IT wabasebenzi beshishini, I-89% yabo bayazi ukuba luyintoni na utshintsho lwedijithali.
Kwiingxoxo zethu neenkokheli zeIT kwezethu I-Dell Luminaries podcast, siyawubona umohluko owenziwa yinkokheli ezomeleleyo kwimibutho. Le mibutho ayinakuze izinze kuzinzo. Inkcubeko yokusebenza kwale mibutho - uninzi lwayo ziinkampani zamanye amazwe ezinamashumi amawaka abasebenzi - kukuba utshintsho oluqhubekayo yinto eqhelekileyo.
Isifundo seNintex siyakuxhasa oku. Ngokuthe ngqo kumbutho wentengiso, isifundo sityhila:
Iipesenti ezingama-60 zentengiso azazi ukuba loluphi utshintsho lwedijithali
Iipesenti ezingama-40 zeengcali zentengiso zikholelwa ngaphezulu kwesihlanu somsebenzi wazo zinokuzenzekelayo
Iipesenti ezingama-74 zikholelwa ukuba inxenye yomsebenzi wabo inokuzenzekelayo.
Imibutho abayisebenzelayo ngenxa yokuswela ubunkokheli kwindlela yokwenza inguqu ngokuphumeza ubukrelekrele bokuzenzela kunye nokuzenzekelayo ukuvala umsantsa. Ngelishwa, isifundo sikwatyhila ukuba iipesenti ezili-17 zentengiso azibandakanyekanga kwiingxoxo zotshintsho lwedijithali ngepesenti ye-12 ebandakanyekayo.
Utshintsho kwidijithali alusayi kuba semngciphekweni
Inguqu yanamhlanje yedijithali ayinabungozi xa kuthelekiswa neminyaka elishumi eyadlulayo. Ngokuziphatha komthengi kwidijithali kuya kuqikelelwa ngakumbi kwaye inani lamaqonga afikelelekayo ayanda, iinkampani akufuneki zenze utyalo mali olukhulu ababekade benalo ukwenza nje iminyaka embalwa.
Inqaku elichanekileyo yinkampani endincedisayo ngeempawu zedijithali. Umthengisi ungene ngexabiso elikhulu elinokuthatha iinyanga ukuphinda alibuyise, ukuba banako. Ifuna inkqubo yobunini eyayiyeyeyomnini kwaye igcinwe ngumthengisi, efuna ukubhaliswa kwiqonga labo kunye nokuthengwa kwezixhobo zabo. Inkampani inxibelelane nam yandicela uncedo ukuze ndifikelele kwinethiwekhi.
Kunconywe liqabane, ndifumene isisombululo esisebenzisa ii-AppleTV kunye nee-HDTV eshelfini emva koko ndenza isicelo esixabisa i-14 / mo nganye kwiscreen- Kitcast. Ngokungafuni ukwenza utyalomali olukhulu kunye nokusebenzisa isisombululo esishelufini, inkampani izakubuyisa iindleko ngokukhawuleza nje ukuba inkqubo iphile. Kwaye kubandakanya nemirhumo yam yokubonisana!
Ekuqwalaseleni imeko ye Sears 'ngoku kutshona, Ndicinga ukuba yile nto yenzekileyo. Wonke umntu ngaphakathi wayeqonda ukuba inkampani ifuna ukuguqulwa, kodwa basilela kubunkokeli ukwenza oko kwenzeke. Ukuzinza kunye nobume be-quo babubekile kumashumi eminyaka kunye nolawulo oluphakathi boyika utshintsho. Olo loyiko kunye nokungakwazi ukuziqhelanisa kukhokelele ekufeni kwabo okungenakuphepheka.
Utshintsho kwidijithali aloyikiswa ngokungeyomfuneko ngabasebenzi
Isizathu somgca wabasebenzi beshishini abafumani memo malunga neenzame zenguqu- kwaye banoloyiko lomsebenzi olungenasiseko njengesiphumo- kukuba akukho nkokeli icacileyo emva kwemizamo yenguqu. I-Nintex ifumene ukunqongophala kwemvumelwano malunga nokuba ngubani omele akhokele iinzame zenguqu kwidijithali kumbutho.
Ngenxa yokunqongophala kolwazi, umgca wabasebenzi beshishini kunokwenzeka ukuba bajonge iinguqu zenkampani kunye neenzame zokuzenzekelayo njenge ngokubeka esichengeni imisebenzi yabo, nangona oku kungenjalo. Phantse isinye kwisithathu sabasebenzi banenkxalabo yokusebenzisa amandla okuqonda anokubeka emngciphekweni imisebenzi yabo. Nangona kunjalo, uninzi lwemisebenzi aluyi kuhamba ngenxa yenkqubo yokuzenzekelayo.
Ngaphakathi kwisebe lentengiso kunye nentengiso endisebenza nalo, iinkampani sele zichebile izibonelelo zazo ubuncinci. Ngokutyala imali kutshintsho lwedijithali, awukho umngcipheko wokupheliswa, kukho ithuba lokusebenzisa italente yakho ngokufanelekileyo. Ukutyhila ubuchule kunye nobukrelekrele bamaqela akho okuthengisa kunye nawokuthengisa sisona sibonelelo siphezulu sotshintsho lwedijithali!
Khuphela i-State of Study Intelligence Study Study
tags: utshintsho lwe digitalUkukhuphelaukuzenzekela ngokuzenzekelayonintexpdfInkqubo yokufunda ngokuzenzekelayoumbikooomatshini bokuthengisautshintsho kwintengiso